Ungawusebenzisa Kanjani Umhlangano Wokusondeza Ukuqopha Isivakashi Esikude Ku-Podcast Yakho Kumathrekhi Ahlukile | Martech Zone
Angikwazi ukukutshela wonke amathuluzi engiwasebenzisile noma ngawabhalisela esikhathini esedlule ukurekhoda izingxoxo ze-podcast ukude - futhi ngaba nezinkinga ngawo wonke. Kwakungenandaba ukuthi ukuxhumeka kwami ​​kwakukuhle kangakanani noma ikhwalithi yehadiwe… izingqinamba zokuxhuma eziphakathi nendawo nekhwalithi yomsindo cishe njalo kwakungenza ngiphonsa i-podcast.
Ithuluzi lokugcina elihle engangilisebenzisa kwakuyi-Skype, kepha ukwamukelwa kwesicelo kwakungasakazeki ngakho izivakashi zami cishe ngaso sonke isikhathi zazinenselelo yokulanda nokubhalisela i-Skype. Ngokwengeziwe, ngaleso sikhathi bekufanele ngisebenzise okuthengiwe i-add-on ye-Skype ukurekhoda nokuthumela ithrekhi ngayinye.
Sondeza: The Perfect Podcast Companion
Umuntu engisebenza naye wayengibuza ukuthi ngiziqopha kanjani izivakashi ezikude ngolunye usuku futhi ngamazisa ukuthi ngisebenzisa ZoomIsoftware yomhlangano. Washaywa umoya lapho ngamtshela ukuthi kungani… inketho ku-Zoom ikuvumela ukuthi uthumele isivakashi ngasinye njengethrekhi yaso yomsindo. Vele uye ku- Amasethingi> Ukuqopha futhi uzothola inketho:
Lapho ngiqopha ingxoxo, ngihlala ngigcina umsindo kwikhompyutha yasendaweni. Lapho nje inhlolokhono isiqediwe, i-Zoom ithumela umsindo kumkhombandlela wokuqopha wendawo. Uma uvula ifolda yendawo oya kuyo, uzothola ukuthi ithrekhi ngayinye isefolda eqanjwe kahle bese kuthintwa ithrekhi yomhlanganyeli ngamunye:
Lokhu kungenza ngingenise ngokushesha ithrekhi ngayinye yomsindo kwiGarageband, ngenze ukuhlela okudingekayo ukususa ukukhwehlela noma amaphutha kuthrekhi engiyidingayo, engeza ama-intros ami nama-outros, bese ngithumela umphathi wami we-podcast.
Ngincoma futhi ukuthi ngigcine okuphakelayo kwevidiyo yakho ngesikhathi se-podcast! Njengoba ngikhuluma nesihambeli sami, ngikholelwa ukuthi izinkomba zevidiyo esizithatha komunye nomunye zengeza ithani lobuntu engxoxweni. Ngokwengeziwe, uma ngike ngafuna ukuthi ngelinye ilanga ngishicilele amathrekhi evidiyo ama-podcast ami, nami ngangiba namavidiyo!
Okwamanje, ukugcina i-podcast yami kungumsebenzi owanele, noma kunjalo!
Tags: amathrekhi alalelwayothekelisa amathrekhi alalelwayopodcasti-podcastingamathrekhi ahlukenezoomzoom ukuqoshwa
Amandla we-Stirista Amandla Wayo Omazisi Omusha aneDatha Yesikhathi Sangempela